अ'न्तरजा' तीय बि'बाह गरेको भन्दै आ'फ्नै दाईले बहि'नी लाई मा' रीदिए दाजु र बहिनी बिच अनै* तिक सम्ब' न्ध - Public 24Khabar
Home News अ’न्तरजा’ तीय बि’बाह गरेको भन्दै आ’फ्नै दाईले बहि’नी लाई मा’ रीदिए ...
अ’न्तरजा’ तीय बि’बाह गरेको भन्दै आ’फ्नै दाईले बहि’नी लाई मा’ रीदिए दाजु र बहिनी बिच अनै* तिक सम्ब’ न्ध
अन्त’रजा”तीय बि’बाह गरेको भन्दै आफ्नै दाईले बहि’नी लाई मा’ री**दिए दाजु र बहिनी बिच अनै**तिक सम्ब,न्ध
नेकपा विभाजनमा ती नेताले अहिले ओलीलाई साथ दिएका छन् । माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षको राजनीतिक इतिहासमा रायमाझीले सधै भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका थिए । तर, संविधान जारी भएपछि ०७२ असोजमा भट्टराईले माओवादी छाडेर नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा भने रायमाझीले साथ दिएका थिएनन् । तर, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल र उनी निकट नेताहरुले रायमाझीलाई सधैंजसो भट्टराई निकट नेताको रुपमा चित्रण गर्दथे । यतिसम्म कि रायमाझी माओवादीभित्र भट्टराईको समूहबाट पटक-पटक मन्त्री बनेका थिए । रायमाझी ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्री थिए ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्री बनेका साह पनि माओवादी आन्दोलनको इतिहासमा भट्टराई निकट नेताकै रुपमा चिनिन्छन् । नेकपा विभाजनपछि दाहाल र नेपालले अगाडि बढाएको पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएकोमा लिखित असन्तुष्टि राखेका साह पनि तत्कालीन माओवादीमा भट्टराई समूहबाट विभिन्न जिम्मेवारी लिँदै आएका थिए । रायमाझीले जस्तै साहले पनि भट्टराईले माओवादी छाड्दा निर्णायक अवस्थामा साथ दिएका थिएनन् । मधेसमा दाहालले मात्रिका यादवलाई र भट्टराईले साहलाई अगाडि बढाउँदै आएका थिए । यतिसम्म कि एउटा हत्या अभियोगमा साहलाई भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा जोगाएको समेत आरोप लाग्दै आएको छ ।
बिहीबारको दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका लामाले शुक्रबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । लामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा उम्मेदवारमा पराजित भएका थिए । लामा तत्कालीन माओवादीमा रामबहादुर थापा निकट मानिन्थे । यस्तै, तत्कालीन माओवादीमा दाहाल निकट मानिएका चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । चौधरी यसअघि कृषिमन्त्री पनि भएका थिए । भट्टराई निकट मानिएका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने दाहाल नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन् ।
Previous articleसेतीको पुलमुनि भेटीयो यस्तो अब* स्थामा श *व ! क्रिसमसकै दीनमा के भ’यो यस्तो, यसरी निकाल्यो प्रह* रीले
Next articleअब ओली प्रचण्ड होइन रबि दाई प्रधामन्त्री बनुपर्छ ! हामी चुनाब जिताउछौ, राजनीतिमा आउनुस Public Review